အတွေးအခေါ်ပညာ၏ ပြဿနာများ အပိုင်း(၂) ဘာထရန်ရပ်ဆဲ – politicsfreakcnz
Posted on August 1, 2013 July 14, 2014 by ချမ်းငြိမ်းဇော်
ဒီလိုဆိုတော့စားပွဲတကယ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲဒီ့တကယ့်စားပွဲဟာကျနော်တို့လက်ငင်းမြင်ရ၊ကြားရ၊တွေ့ထိရတာတွေကနေသိရတဲ့စားပွဲနဲ့မတူဘူးဆိုတာထင်ရှားလာပါတယ်။အဲဒီ့တကယ့်စားပွဲဆိုတာဟာတကယ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းကျနော်တို့ချက်ချင်းလက်ငင်းလုံးဝမသိနိုင်ပဲချက်ချင်းလက်ငင်းသိထားသမျှတွေထဲကကောက်ချက်ဆွဲပြီးတော့မှသာသိနိုင်တယ်လို့ပြောရပါတော့မယ်။ဘာလို့ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီအခြေအနေမှာအလွန်ခက်တဲ့မေးခွန်းနှစ်ခုတပြိုင်နက်ပေါ်လာလို့ပါပဲ။အတိအကျပြောရရင်တော့၁။အဲဒီ့“တကယ့်”စားပွဲဆိုတာဟာတကယ်ကောရှိပါရဲ့လား? ၂။တကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုအရာဝတ္ထုမျိုးဖြစ်နိုင်ပါသလဲ? ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပါပဲ။
ကျနော့အထင်တော့ဒီလိုအာဘော်မျိုးဟာယုတ္တိအမှားကြီးအပေါ်အခြေခံထားတယ်ဆိုပေမယ့်လည်းဒါကိုဆထပိုးတိုးပြီးပြောကြတဲ့သူတွေဟာခပ်တိုတိုဒါမှမဟုတ်ခပ်လွယ်လွယ်ပြောလိုက်ကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်မှန်တာမှားတာအသာထားဒီအာဘော်မျိုးဟာအလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့ချဲ့ထွင်တဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့အတွေးအခေါ်ပညာရှင်အများစုလို့ပြောလို့ရနိုင်တဲ့အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ပေါင်းမြောက်များစွာကချဲ့ထွင်ပြောဆိုထားခဲ့ကြတာပါ။သူတို့စွဲယူထားတဲ့အမြင်ကတော့ “စိတ်နဲ့သူ့ရဲ့အတွေးအကြံတွေကလွဲလို့ကျန်တာအစစ်အမှန်မဟုတ်ဘူး” ဆိုတာပါပဲ။ဒီလိုအတွေးအခေါ်ပညာရှင်တွေကိုတွေးကြံဝါဒီ(idealist)တွေလို့ခေါ်ကြပါတယ်။သူတို့တွေဟာဒြပ်ဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြကြပြီဆိုရင်ဘာကလေပြောသလိုဒြပ်ဝတ္ထုဟာတကယ်တမ်းအတွေးအကြံအစုအပေါင်းတွေကလွဲလို့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းလိုက်ဘနစ်ဇ်(၁၆၄၆-၁၇၁၆)ပြောသလိုဒြပ်ဝတ္ထုလို့ထင်ရတဲ့အရာဟာမည်ကာမတ္တမျှသာဖြစ်တဲ့အခြေခံစိတ်ကလေးတွေအနည်းနဲ့အများရဲ့အစုအပေါင်းတခုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်ဒီအတွေးအခေါ်ပညာရှင်တွေကဒြပ်ဝတ္ထုဟာစိတ်နဲ့မတူတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာကိုငြင်းကြပေမယ်လို့ဘာလိုပဲပြောပြောတခြားအဓိပ္ပာယ်တခုနဲ့တော့လက်ခံထားကြပါတယ်။ကျနော်တို့မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းနှစ်ခုကိုမှတ်မိကြမယ်ဆိုရင်၁။တကယ့်စားပွဲဆိုတာရောရှိရဲ့လား၊၂။တကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုအရာဝတ္ထုမျိုးဖြစ်နိုင်ပါသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းနှစ်ခုကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးတွေအတွက်ဆိုရင်ဘာကလေနဲ့လိုက်ဘနစ်ဇ်တို့နှစ်ယောက်လုံးကတကယ့်စားပွဲဆိုတာကိုရှိတယ်လို့ဝန်ခံပါတယ်။ဒါပေမယ့်ဘာကလေကဒီရှိတယ်ဆိုတဲ့စားပွဲဟာဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်ထဲကတစုံတရာသောအတွေးအကြံတွေပဲလို့ပြောပါတယ်။လိုက်ဘနစ်ဇ်ကတော့ဒီတကယ့်စားပွဲဆိုတာဟာအသက်ဝင်ခြင်းတွေစုနေတဲ့တနေရာ(a colony of souls)လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာကျနော်တို့ရဲ့ပထမမေးခွန်းကိုဟုတ်မှန်ကြောင်းဖြေဆိုထားပြီးတော့သာမန်လူအများအမြင်အရပဲသူတို့ရဲ့ဒုတိယမေးခွန်းအပေါ်ဖြေဆိုပုံကကွဲပြားနေတာပါ။တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တွေအားလုံးလိုလိုကတကယ့်စားပွဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသဘောတူကြပါတယ်။ကျနော်တို့ရဲ့အာရုံခံစားမှုအချက်အလက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အရောင်၊ပုံပန်း၊ချောမွေ့မှုစတဲ့အာရုံခံစားမှုတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ဆိုတာဟာကျနော်တို့ရဲ့(စိတ်)အပေါ်မှာဘယ်လောက်ပဲမူတည်နေနေဒီခံစားမှုအချက်အလက်တွေပေါ်တယ်ဆိုတာကပဲတစုံတရာဟာကျနော်တို့နဲ့သီးခြားဖြစ်တည်နေတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်အသားတခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအဲဒီ့အတွေးအခေါ်ပညာရှင်အားလုံးလိုလိုကသဘောတူကြပါတယ်။ကျနော်တို့ရဲ့အာရုံခံစားမှုအချက်အလက်တွေနဲ့လုံးလုံးလျားလျားသီးခြားကွဲပြားဖြစ်တည်နေနိုင်တဲ့တစုံတရာ(စားပွဲ)ဟာကျနော်တို့(တကယ့်စားပွဲနဲ့အာရုံတခုခုအားဖြင့်)နီးစပ်မှုရှိလာတဲ့အခါတိုင်းမှာအဲဒီ့ရှိနေတဲ့ဟာ(စားပွဲ)ကပဲအာရုံခံစားမှုအချက်အလက်တွေကိုဖြစ်စေတာလို့လည်းသူတို့တွေသဘောတူထားကြပါတယ်။
Posted in Philosophy	Tagged Philosophy
← အတွေးအခေါ်ပညာ၏ ပြဿနာများ
အတွေးအခေါ်ပညာ၏ ပြဿနာများ(ဘာသာပြန်) အပိုင်း(၃) (ဘာထရန်ရပ်ဆဲလ်) →